ငွေလမင်း: ဖြစ်ချင်ခဲ့သောဆန္ဒများနှင့် မဖြစ်ချင်သောဆန္ဒများ
Posted by ငွေလမင်း at 12:13 AM
ဟေဟေ့ မျက်မှန်ဝင်းဝင်းနဲ့ ငွေလမင်းရေ...
အနော်တော့ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် သိပါပြီ... ဇီးသီးထုပ် ..အဲ စီးရီးထုတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်လဲ ထီထိုးပါ။
တိုးဂိုက်လေးဖြစ် တိုးလ်ဂိုက်လေးဖြစ်ချင် သီချင်းလေးလဲ ဆိုချင်တာ... ချင်ကာပူသွားပါ့မယ် မေမေမုန့်ဖိုးလျော့ပါ ဖြစ်ပါရဲ့လား.
ဖြစ်ချင်တာ တော်တော်များများ ဖြစ်ခဲ့တာ ဆိုတော့ မဆိုးဘူးပဲ။ ကျွန်တော်က ငယ်ငယ်ထဲက စာတွေအများကြီးဖတ်ပြီး အတွေးတွေ လွန်ခဲ့လို့နဲ့တူတယ်။ ဘာကိုမှ မဆုပ်ကိုင်ထားဘူးဆိုတဲ့ အတွေးငယ်ငယ်က စွဲခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဘာဖြစ်ချင်ခဲ့မှန်းကို ခုထိ စဉ်းစားမရဘူး။ ဘာရယ်မဟုတ်ဘဲ နိင်ငံခြားထွက်မယ်တော့ တွေးဖူးတယ်။ တကယ်ရောက်ရတာပါပဲ။ ခုတော့ အိမ်ပြန်မယ်ပဲ တွေးနေတော့တယ်။
သတိတရနဲ့ တဂ်တာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က တဂ်ပို့စ်တွေ သိပ်မရေးတတ်လို့ ရေးလေ့သိပ်မရှိဘူးဗျ။
ဘာရေးရမှန်းမသိလို့ မရေးဖြစ်ရင်တော့ ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ။
ငယ်ငယ်က ဖြစ်ချင်တာတွေ ဆိုတော့ အဲဒီလိုပဲ များနေတတ်ပါတယ်။ နောက်တော့ အချိန်က သင်ပေးသွားတာပါပဲ။ အင်း. . . ကျနော် ထင်ပါတယ်.. အဖေထက် ကဲသော သားတော့ ဖြစ်မှာပါ ဆိုပြီး မစ္စဆေးလ်ဗားမွန်းကို ကြပ်ပေး လိုက်ပါဦးမယ်။
ရေးတော့ ရေးပေးမယ်ဗျာ။ အရင်လျာထားတာလေးတွေ ရှိတော့ ခဏတော့ စောင့်နော်။
မျက်မှန် ၁၀ လက်တောင် ရတဲ့ကုသိုလ် နည်းသလား..။
နောက် ၁၀ လက်လုံးတပ်တာလည်း တော်တော်ကို ကြည့်ရတာ ကောင်းမှာပဲ မော်ဒယ်..မျက်မှန် ... တပ်နည်း ဖြစ်ခဲ့မယ်ထင်ပါ့... ။
ဖြစ်ချင်ခဲ့တာတွေ များတာကို ဖတ်ရတော့ .... လူတော်တော်များများလည်း အဲလိုပဲ ဟိုဟာဖြစ်ချင် ဒီဟာဖြစ်ချင်ပါပဲလား လို့ သတိထားမိသွားလေရဲ့..။
အဲ့ဒါ အဲ့ဒါ အဲ့ဒါ ဘ၀ သံသရာ....... တဲ့နှယ်.. တယ်နှယ်.. တဲ့နှယ်...
ဘ၀အကြောင်းတွေ ပြောချင်တော့ဘူးဗျာ.. ဘ + ၀ = ဘီယာ + ၀က်နံရိုး လို့ယူဆတဲ့ သူတွေ များနေကြလို့ ရယ်...... :P
အသံမကောင်းတဲ့ အဆိုတော်တွေလဲ ရှိနေတာပဲ
အင်းးး အငယ်တွေက အကြီးဖြစ်ချင်၊အကြီးတွေက အငယ်
ဖြစ်ချင်ကြတာ သဘာဝထင်ရဲ့နော့...။အင်ဂျင်နီယာ တိုး
မောင်ငွေလမင်းက မကောင်းပြောပေမဲ့ ဖတ်လို့ အလွန်ကောင်းပါတယ်.. ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ပြောချင်တာလေးကို ပေါ်လွင်အောင် ပြောသွားနိုင်တာဘဲဟာ....
ဟိဟိ .. ကျပ်ပေးလိုက်တယ်..
ငွေလမင်းရေ တောင့်တောင့်ကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ ဖတ်လို့ ကောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော်လို့သုံးတာ မန်တလေးသူလား
အားရအောင် ဆိုးခဲ့လို့ လေ . . . :P
ရေးထားလေး စီကာစဉ်ကာ ဖတ်ကောင်းပါတယ်။　ဖြစ်ချင်တာတွေထဲက တချို့တ၀က် ပြည့်သွားနေပြီဆိုတော့.. ဘ၀က ပျော်စရာပေါ
သီချင်းဆိုပြီးတင်ပေး အဲ့တာမှ အသံကောင်းမကောင်း သိမှား)
မန်းတလေးသူလေးငွေလမင်းရေ... နောက်လဲ ရေးစရာတွေရှိသေးတယ်ဆိုရင် ဆက်ရေးနော်။
ညီမရဲ့အရေးအသားက စာဖတ်သူကိုဆွဲဆောင်မှုရှိ ပါတယ်။ ဆက်ရေးဖို့အားပေးတယ်နော်...
တောင့်တောင့်ကြီးဖြစ်မနေပါဖူး တကယ်စိတ်ဝင်တစားဖတ်မိပါတယ်။ တိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေလည်းရှိလို့ ပါ။
ဖြစ်ချင်ခဲ့တာတွေ မဖြစ်လာတာလည်း အများကြီး... မဖြစ်ချင်ခဲ့တာတွေ ဖြစ်လာတာလည်း အများကြီး.. ရှိကြတာပါပဲ...
ဖြစ်ချင်တာတွေကို အသာမေ့ပြီး ဖြစ်နေတာတွေကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစား...
ဖြစ်ခွင့်ကြုံတဲ့ နေ့ရောက်ရင် ဖြစ်ချင်တာတွေနဲ့ ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို ပေါင်းပြီး အမြတ်ထုတ်လိုက်ရင် ဖြစ်သမျှအကြောင်း အကောင်းဆုံး ဖြစ်လာမှာ သေချာပါရဲ့ . . .